FARITRA ATSINANANA : Nizaha ifotony ireo kaominina saro-dalana ny Governora
Tsy nataon-dRafidison Richard Théodore, governoran’ny Faritra Atsinanana ho fotoana very fotsiny ny fialan-tsasatry ny fetin’ny olomasina fa nanatontosany asa hatrany, ka nanaovany fitsidihana an’ireo kaominina tena saro-dalana ao anatin’ny disitrikan’ i Mahanoro. 24 novembre 2021
Nanomboka ny 28 oktobra ka hatramin’ny 2 novambra lasa teo izany fitsidihana izany. Ankoatra ny tao Mahanoro izay nanaovana lanonana ara-panjakana nanolorana fanampiana avy amin’ny Filoham-pirenena sy ho an’ny sekolin-dry masera, dia nitohy tany amin’ny kaominina ambanivohitr’ i Betsizaraina sy Ambinanidilana ny dian’ ireo delegasiona. Nanomboka teo dia resaka fotodrafitrasa no nibahan-toerana. Famakian-dalana mirefy 54 km 300m, tetezana miisa 10. Vokany, vahoaka miisa 87 524 anatina fokontany miisa 32 no hisitraka ny tombontsoa amin’izany fahavitan’ny lalana sy tetezana izany. Fotodrafitrasa maro ihany koa no tontosa ka nitokanana tsena tao Ambinanidilana sy notolorana ny fanalahidin’ny CEG manara-penitra. Kaominina ambanivohitra Ambinanidilana dia tena mahavokatra, saingy saro-dalana. Hita ao avokoa ny jirofo, lavanila, vary, paraky gasy, misy volamena ihany koa. Noho izy tany lavitra andriana dia tsy voaaro ny alan’i Vahibe izay ala arovana ao an-toerana.
Vahoaka 87 524 hahazo tombontsoa
Hazakazaka arahin-tosika ny fampandrosoana isam-paritra mba hanatrarana ny veliranon’ny Filoham-pirenena, hoy ny governoran’ny Faritra Atsinanana, Rafidison Richard Théodore, raha nitsidika ireo kaominina ambanivohitra anatin’ny disitrikan’ i Mahanoro, ny 28 oktobra ka hatramin’ny 02 novambra lasa teo izy. Ho an’ny tao Mahanoro aloha dia natolotry ny governora ny mpanjono tao an-toerana ny harato sy aron’ akanjo tsy mahalentika, izay avy amin’ny Filoham-pirenena. Nanolotra ihany koa simenitra 50 kitapo ho an’ny sekolin-dry masera, Notre-Dame de la paix izy, noho izy maintimolalin’ ity sekoly tsy miankina ity. Nitohy nihazo ny kaominina Betsizaraina izay manana vahoaka 38 024 mitsinjara amina fokontany 12 ny dia. Anisan’ny nojerena manokana ny fiantombohan’ny fanamboaran-dalana rarivato mirefy 600 metatra sy fanolorana jiro mandeha amin’ny herin’ny masoandro ary ny famakian-dalana vaovao miainga eo amin’ny sampanana Menagisa sy bakan’i Mangoro ka hihazo ny fokontany Tratramarina ary hipaka hatrany Androrangavola, mirefy eo amin’ny 28 kilometatra. Hatreto no farany afaky ny fiarakodia ka mbola misy halaviran-dalana eo amin’ny 26 kilometatra sy 300 indray vao tonga ao amin’ny kaominina ambanivohitra Ambinanidilana. Ity farany izay kaominina mampisaraka ny Faritra Atsinanana sy Alaotra Mangoro. Tao amin’io tanàna io ihany koa no nilatsahan’ny tavonin-dRafidison Richard Théodore. Vahoaka miisa 87 524 no hisitraka ny tombontsoa amin’ny fahavitan’io lalana 54 kilometatra sy 300 m io. Mitsinjara amin’ny fokontany miisa 32 anatina kominina ambanivohitra miisa roa izy ireo. Nandritra ny fitsidihana sy fandraisam-pitenenan’ny governoram-paritra dia naverimberiny hatrany ny fampirisihana ny vahoaka mba handray anjara amin’ny asa fampandrosoana, ka hiray hina sy hifanome tanana amin’ny Fitondram-panjakana, indrindra amin’ny asa tanamaro. Nanentana ny fokonolona izy mba hanamboatra ny azo atao tanana amin’ny fangadiana lalana, ka izay tsy vitan’ny herim-batana kosa dia hampiasana an’ ilay fitaovana vaventy avy amin’ny Filohan’ny repoblika, Andry Nirina Rajoelina.
“Tanjona mantsy, hoy izy, dia tsy hisian’ny kaominina ho latsaka aorian’ny hafa intsony, esorina tsy hisy intsony izany kaominina lavitr’andriana izany fa samy hisitraka fampandrosoana tian’ny Filoham-pirenena tratrarina ny rehetra. Efa voaporofo rahateo izany tamin’ny fanamboarana ireo tetezana simba efa ho 40 taona lasa ka izao indray vao narenina ka nahafahan’ny fiara tonga tao Androrangavola 40 taona taty aoriana”.
Lalana harambato, fiakarana, ranon’ i Mangoro
Amin’ izay lalan-dratsy izay hatrany dia tsy misy fiara afaka mampitohy an’ i Mahanoro sy Marolambo raha tsy ireo kaomiaobe 6x6. Ireto farany izay herinandro an-dalana, ankoatra izay dia taterina an-tongotra ny entam-barotra ho an’ i Marolambo sy Ambinanidilana. Ireo farany izay mitondra ny entana ka 1 000 Ariary ny saran’ny iray kilao ary maharitra 7 ka hatramin’ny 12 andro an-dalana ny filanjana entam-barotra. Ny vantan-dehilahy matanjaka iray dia mahazaka entana 50 hatramin’ny 70 kilao amin’izany. Aorian’ny fahatongavana eo amin’ny fokontanin’ Androrangavola dia raikitra ny fitaingenana môtô izay mamakivaky harambato sy fiakarana sy fitsakana ny reniranon’ i Mangoro. Manginy fotsiny ny fikaraman’ny mponina indrindra tovolahy matanjaka manampita môtô amin’ny tetezana tapaka izay andoavana 5 000 Ariary isaky ny môtô, fa tsy nahakivy ny governoram-paritra Atsinanana izany. Tao ny nianjera, fa nampiakatra ny hambom-pon’ny Governora izany ka nilazany fa ny fidinana ifotony toy izao dia ahafahana mamaha ny olan’ny vahoaka isaky ny kaominina sy fokontany, ka nilazany fa tsy ho ela dia hiditra amin’ny fanadihadiana momba an’ io ampahan-dalana hahatongavana ao Ambinanidilana ny teknisianina niaraka taminy, ka tombanana fa ny famatsiam-bola avy amin’ny Filohan’ny repoblika ho an’ny Faritra ny taona 2022 dia hatomboka ny asa eo amin’ny ampahan-dalana 26 kilometatra sy 300.
Na eo aza ireo rehetra ireo dia anisan’ny nisitraka fotodrafitrasa avy amin’ny Filoham-pirenena ity kaominina ity dia ny hazavana sy CEG manara-penitra izany. Natolotra ny alahady 31 oktobra teo ny fanalahidy izay manana efitrano roa ary mahazaka mpianatra 100. Efa rakotra hazavana ihany koa ny tanàna fanambin’ny Filoham-pirenena rahateo ny fahazavana ho an’ny daholobe, ka anisan’ny nisitraka izany ity kaominina ambanivohitra anisan’ny saro-dalana indrindra ity. Nandritra an’io fidinana ifotony tao an-toerana io ihany koa no nitokanan’ny governora ny tsena vaovao vita simenitra sy nametrahana samboady ho an’ireo lefitry ny ben’ny tanàna roa lahy.
Manan-karena fa saro-dalana
Amin’ny ankapobeny dia kaominina ambanivohitra manan-karena, Ambinanidilana ity fa saingy olana ny lalana. Saika hita ao avokoa ny karazam-bokatra fanondrana toy ny lavanila, jirofo, kafe, poavatra, ary vary. Manana omby sy kisoa ihany koa ary mbola manodidina ny 7 000 Ariary ny kilaon’ny henan’omby raha 8 000 Ariary ny kisoa. Fa na eo aza ireo rehetra ireo dia mitrandraka volamena ihany koa ny fidiram-bolan’ny mponina manodidina rehetra amin’io kaominina io. Amin’ izay resaka vokatra izay hatrany dia mahatratra 230 000 Ariary ny kilaon’ny jirofo maina, misy kosa mividy azy amin’ny kapoaka 1 400 Ariary ny kapoaka iray amin’ny jirofo lena. Mahatratra 100 000 ariary kosa ny vidin’ny iray kilao amin’ny lavanila maina fa amin’ ity farany dia saika very noho ny halatra ataon’ny jiolahy any anaty ala.
Ny fanadihadiana hatrany no nahalalana fa mahatafavoaka volamena 1 ka hatramin’ny 4 grama ny mpitrandraka isan-kerinandro, ny reniranon’ i Mangoro mandalo eo rahateo ritra ka manamora ny fangadiana eny ambany vato rehetra eny. Tsy amin’ny alalan’ny grama anefa ny fifanakalozam-barotra fa fatra atao hoe atatra, ka ny iray atatra vidin’ny mpanangona 5 000 ariary raha 30 atatra ny iray grama. Noho ireo rehetra ireo dia nanafatrafatra mafy ny solombavambahoka voafidy tao amin’ny disitrikan’ i Mahanoro, Rakotoson Hubert fa miparitaka ny vola sandoka entin’ ireo mpanangom-bokatra sy mividy volamena ka tokony ho mailo ny rehetra. Ny olana mantsy dia tsy mba mitory ny fokonolona na efa maro aza ny voafitaka amin’izany vola sandoka izany.